South Africa: Toxic City (Al Jazeera Eng)
Channels Al Jazeera Eng South Africa: Toxic City Forum
South Africa: Toxic City
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Thu, Sep 16, 7:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Wed, Sep 15, 2:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Tue, Sep 14, 1:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Mon, Sep 13, 9:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Sun, Sep 12, 7:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Sat, Sep 11, 2:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Fri, Sep 10, 1:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Thu, Sep 9, 9:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Mon, Apr 20, 7:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Sun, Apr 19, 2:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Sat, Apr 18, 1:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Fri, Apr 17, 9:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Thu, Aug 1, 7:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Wed, Jul 31, 2:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Tue, Jul 30, 1:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Mon, Jul 29, 9:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Sun, Jul 28, 7:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Sat, Jul 27, 2:00 AM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Fri, Jul 26, 1:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins
South Africa: Toxic City Investigating the toxic legacy of South Africa's mining industry, which has made Johannesburg one of the most uranium-contaminated cities in the world. Thu, Jul 25, 9:00 PM Al Jazeera Eng 60 mins